Fampianarana – FJKM Ambavahadimitafo Fampianarana |
Publié le 31 octobre 2021 à 08:10
Publié le 26 juin 2015 à 12:06
Fampianarana nandritry ny Fivorian’ny Mpandray manodidina ny fanetren-tena, alahady 01 desambra 2013 Mpitoriteny : mpitandrina Rakotoniera Eric
« Koa raha niara-natsangana tamin’i Kristy ianareo, dia katsaho ny zavatra any ambony, any amin’ny itoeran’i Kristy, Izay mipetraka eo an-tanana ankavanan’Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany. »(Kolosiana 3:1,2) Fotoana lehibe ho an’ny finoana kristiana NY FIAKARANA NA ASCENSION fa ankalazaina i Jesoa Kristy niakatra velona tany an-danitra. Fotopinoana ampianarin’ny Fiangonana
Fampianarana manodidina ny fanoloran-tena sy ny fanolorana vola eo amin’ny asam-piangonana, nandritry ny fivorian’ny Mpandray ny fanasan’ny Tompo, ny 14 jolay 2013 tao aorian’ny ALahadin’ny Fetim-bokatra Mpitoriteny : mpitandrina Rakotoniera Eric
Araka ny fandaminan’ny Foibe FJKM vaovao dia tsy ho ampiasaina intsony ny fiantsona hoe « mariazy miara mizotra » fa antsoina kosa hoe « fanamasinana fanambadiana efa niorina« . Natokana indrindra izany fanamasinana izany ho an’ireo mpivady efa vita soratra taloha, na efa niteraka… ka mahatsapa fa tonga ny fotoana hanamasinana ny fanambadiany.
Famonjena ankatoky ny fandraisana
Nanamarika ny mpitandrina Rakotoniera Eric fa anisan’ny fiangonana be mpamonjy ny ankatoky ny Fandraisana ny FJKM Ambavahadimitafo amin’ny fiangonana ety ambony ety. Rehefa mifampiresaka tokoa ny mpitandrina dia nahatsikaritra fa raha vao voatonona ny Trinité Masina dia mirihotra mivoaka avokoa ny Mpandray ka vitsy monja no tafajanona. Manentana ary ny mpitandrina mba hotanantsika izany fahazotoantsika
Mitohy ny fianarana Soratra masina izay fanao isan’alarobia amin’ny 5 ora sy sasany eto amin’ny fiangonana. Manasa antsika rehetra izay maniry handalina ny Baiboly, ary indrindra ireo manana anjara amin’ny fanompoam-pivavahana amin’ny alahady 13 oktobra 2013. Ny perikopa 13 oktobra 2013 no hodinihina amin’izany, izay azonao vakina sahady mba hahazahoanao vetivety ny fampianarana izay hoentina.